Cabdicasiis Maxamed Shidane | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waxaan ku soo dhex koray qoys aan waxba aqrin waxna qorin, haddii ay qoraana waa Af-Soomaliga un. Waxaan soo gaaray da’da 17 sano jirka, inan-nimo iyo udgoonkii dhalinyaranimo ayaan dareemay, uma nooleen sidda gabdhaha asaygaygaa u noolyihiin, wax ma baran waligeey, waana la-iidiiday. Qof wax baran karta waxna sosaari karta in aan ahay qoyskaygu ma aaminsanayn, garaacidda iyo gacan qaadku waxay ii aheed wax joogtaa oo ii rukuman habeen iyo maalinba, aabe iyo walaalo hishiis ayaa lagu ahaay falkaan foosha xun, cunta karinta iyo nadiifinta, iyo ka shaqaynta guriga iyo nadiifinta dharka wiilasha waa waxa aan kuu dhalay nayaa waa …
Meel fog ayaan mukul ka arkay, Waxaan isku howlay in aan dhankeeda u dhaqaaqo, anigoo cabsida iga adkaatay Ayaan geesinimo qalbigeeyga iska soo riixay, horaan u fuulay diyaaraddii, Waa ikan anigii oo ka fudud ilbiriqsiyada, misana sidii biriqdii halmar ka dul hillaacay halkii mukushu joogtay, Waxaan la kulmay koox korkoodu wada ifayo, Waaba ummad nuurkoodu ka iftiin badanyahay qoraxda. Wax beey kala qeeybsanayaan, misana iskugu hambeeynayaan cabitaan sidii biyo dhalo ku jiro u muuqdo. In aan dhinaceeyga ka cabo ayaan shaki la’aan u arkay, markii aan carabkeeyga ka codsaday dhedheminta biyahaas isaguna iga ogolaaday, Unbaan halmar u sarqaamay sidii …
Waxaa la yiri; Nin boqor ahaa, ayaa waddo dadku aad u maraan, dhagax weyn ku gooyey. Mid ka mid ah shaqaalihiisii ayuu amar ku siiyey in uu fadhiisto meel dhagaxa u dhaw, si uu u dhagadhageeyo dareenka guud, ciilka iyo falcelinta dadweynaha waddada adeegsada. Mid maalqabeen ah ayaa soo maray waddadii, wuxuu arkay in ay xiran tahay. Baabuurkii ayuu ka soo degay, markaas ayuu qaylo iyo caay isku daray, wuuna iska tagay, isaga oo ku hanjabaya in uu dacweyn doono cidda sidaan sameysay. Waxaa mar kale soo maray waddadii, mid dhismaha ka shaqeyn jiray. Dhagaxii ayuu dhinacyada ka eeggay, …
Wuxuu da’ ahaan jiray 60 sano. Tinta ku taalla madaxiisa ilaa garkiisu way wada gaduuddanayd. Wuxuu ahaay baraha loo gu jecelaay dugsiga sare ee Usaama Bin Seyd. Haybadda macallinnimo waxaa u sii dheer sida xasilloon ee uu cashirka maskaxdaada ugu shubayo, qaab gudbiskiisa iyo sida uu u yaqaanno arday kasta magaciisa oo saddaxan,aad ayuu is kugu jilcin jiray ardaydiisa. Waxuu na bari jiray cashiro la xariirta taariikhda iyo Juquraafiga. Maalin ayaan agta ka soo fadhiistay, isaga oo aad u daallan, culayska shaqada iyo da’da uu ku suganyahay awgeed, gacmihiisa waxaa ka muuqday boorka jeestada uu wax noogu dhigaayay, ishiisu …
Xurriyad la’aanta iyo qofku in uusan cabbiri karin aragtidiisa sax iyo qaladba, waxay horseeddaa faafidda munaafaqnimda iyo bulsho aan soo bandhigi karin xumaanteeda yo samaanteeda. Qof kasta oo bulshada nucaas ah ku soo dhex barbaaray waxuu noqnayaa laba wajiile, naftiisa oo kaliyah jecel, beenna u sheega beenna ka sheega. Maxaa iga galayduna wey ku badantahay bulshada nucaas ah, runta iyo dhaliiceynta xaaladda markaas ay ku sugantahay bulshadas haddii la sheegi maago waxaa loo yaqaannaa (FADEEXAD) iyo in aad beegsatay (QABIIL) ama (DEEGAAN) (SHAQSI) ama (DIIN). Marka gormaa runta la isku sheegaa? oo mugdigaan god curka ah kabixi doonnaa?. Musuqmaasuqa …
Nolasha lammaanuhu, waa nolal ku dhisan wax wada qabsi iyo is faham, iskaashi iyo is garabsiin, iyo in wax la wada dhisto. Ma aha milkiyad iyo cabiidsi, sida ay ku fakaraan rag badan oo maanta ku nool dunida dacalladeeda, gaar ahaan, kuwooda ka soo jeeda bulshooyinka dib jirka ah, siiba anaga, ee nolasha si qallafsan u fahamy. Waxaa dhaqan iyo diin ahaan qoran soona arooray in ninku xaaskiisa qoryaha dabka lagu shito u soo guri jiray, dharkana u dhaqi jiray, biyahana u soo aroori jiray, maanta waxaa jirta nolal ka sahlan tii waagaas jirtay, balse, ka fool xun kana …
Dar-xumadan i haysa Daawgeeda waxa falay Dambiilaha i daashadey Duufaanno igu furay Daaftayda kuba xiray Dullinimo i bidayoo Dadya duunyo iga jaray Dad dayoobay naga dhigay! Daal baa i haayoo Duruurftaa i haysaa Dadku igu dammoodaa Dadnimaan lahayn iyo Dulmahana wax Daafaca! Duul qarankii tuuroo Daan-daansi wada’oo Daciifnimo i badayaa Dunidaan ka buuxa. Daryeel layma fidinoo Deeq layma gaarsiin Damaaciga shisheeyahay Danta guud u diideen Damiir laawe doqon iyo Damiinkeey la duubtaan Dowladdaan raboodana Dabeylahaba raacdoo Daleel maranba joogaa. Diin la igu dilay iyo Demoqoradi aan jirin Deegaan la xaalufin Dib-dhaca i haystiyo Daaraha la gubayee Daris aan la …
Habaar iyo hoogbaa Hagoogta i saartoo Himilo la’aaniyo Herdan baan galayoo Harkii baan ka boxoo Hoy beel i dhigtoo Hummaag aan jirin iyo Heehaab galayoo Hirar ii dhiibtee. Hogya buur i saartoo Hammi beena igu tiri. Halkaan baa kuu habboon Hurda dheer na aan galay. Hiil xumaa i dilatoo Heer kaanna i badayoo Halabuurkay dilatoo Hoggaankayga burisay. Hoobiyaa dhacaayoo Hablihii ku hoobteen Harsan waynnay abidoo Hurintaa colaaddiyo Hoog iyo ba’aay iyo Harraad aan dhammanayn Hoodo iyo ayaan iyo Hawadaan dhex marayaa. Haadigii i uumoow Haaddaa dushaydiyo Hawadeenna duulee Hageheedu waa adi Hoos qabow i geeyoo Harsad macaan i siiyoo …
Xasuuqii Karbala ka dhacay taariikhdu markii ey ahayd 10-ka bisha Muxarram ee sanadka 61-da Hijriyada, kuna aaddan 10/10/68-da taariikhda Miilaadiga, ayaa nagula gaadday, ee maanta yaan nala gaaddin, oo Sunniga xagjirka ah aan laayno, ayuu ku dhawaajiyay wadaad diimeedka Shiicada ah ee lagu magacaabo Ali al-Sistani. Dhinaca kale waxaa durbaanka ka garaacaya wadaadka Sunniga ah ee la yiraahdo Yuusuf al-Qaradawi, oo tiifiiga Aljasiira ka afuufa fidno diimeed iyo naceyb ku wajahan Muslimiinta Shiicada ah. Labbadaan wadaad waxay qandaraas ku la kala jiraan Iiraan iyo Qadar, Islaamkana wey naafeeyeen. Waxa ka dhacaya Ciraaq, Yaman, Suuriya, waa sheeko ey iska kaashanayaan …
Waxaan ahay wiil Soomaaliya, oo guri iyo quud uusan maalinna u dhibaatoon ku soo barbaaray. kala dambayn iyo xeer dagsanna aan arkin waligiis, intaas waxaa ii sii dheer, waxaa la iga dhaadhacsiiyey in aan ka soo jeeddo beel awood iyo itaalba leh, odayaasha beesha iyo qoyskaba waa la aaminsanaay arrintaas. Wax waliba waxay ila ahaayeen wax haddii aan u gacan qaaddo aan heli karo, maxaa yeelay waxaan ku dangiiggay duud libaax (QABIILKA). Waxaan iska dhaadhiciyey la iiguna xog warramay in aan deegaanka innagu leennahay, dadkii guulaystay ee taarikhda baalka dahabka ka galayna aan nahay, tiro iyo tayo wax nagu …